nri na nri | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Spice Plum achicha Ntụziaka
Igwe plọm a nwere mgwakota agwa dị nro, juputara na ụtọ na-atọ ụtọ, nke na-enye cinnamon na ginger. Achịcha na-atọ ụtọ na achịcha dị ụtọ, ọ gaghị ekwe omume ị takeụ ihe mgbakwunye! Efrata maka Plum achịcha - Ntụziaka ...
N'oge udara, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ nwere ike izipu tomato dị mma ka ha kwụsị - maka nchekwa ruo mgbe oyi. Site na ebuka ị nwere ike ime mmanya na-egbu egbu nke ị nwere ike ịbanye n'ime ezumike. A na - enweta ihe ọ drinkụ drinkụ ...
Ihendori 3 maka ibe ma obu anụ
Ihe na 02.10.2019 02.10.2019
N'ime ụdị sọks nri dị iche iche, ọkacha mmasị m atọ ndị a. Ana m esi nri otu onye n’ime ha mgbe niile maka anụ, ọkụkọ, eghe n’ụlọ ma ọ bụ zụta, macaroni, nri pita na ọtụtụ ndị ọzọ. Ezigbo ...
Osi nri maka uto ọ bụla: nri TOP-5 maka anụ ahụ ji esi anụ, nri na isi nri
Ihe na 30.09.2019 30.09.2019
Undia ndị a dị ebube bụ nnukwu mgbakwunye na efere ọkacha mmasị gị. Na ha, nri gị ga-adị ụtọ karị. Nhọrọ nke Ezi ntụziaka. Mpempe chiiz Na 200 gr mepụtara ihendori emebere eme: 110-120 gr cheese siri ike; ...
Cucumbers marinated na apụl - pụrụ iche uto!
Achịcha a mịrị amị, kukumba dị iche na ndị ọzọ niile dị nro na nro nke ụdị apụl dị iche iche na-enye. Ihe eji arụ ọrụ ahụ na-atọ ezigbo ụtọ ma na-atọ ụtọ, ngwakọta nke cucumbers na mkpụrụ osisi dị na ya na-enye anya mara mma. ...
Ntụziaka mbụ maka okroshka nwere salmon nke nnu
N'oge ọkọchị, ọtụtụ na-enwekarị okroshka na tebụl. Kedu ihe kwesiri izo, a na-amata ịhụnanya nke ụmụ amaala ibe anyị maka efere a. Rodị okroshka dị iche iche ga-eje ozi na cafe na ụlọ oriri ọ bụla, na ...
O siri ike ịnwale ma sie okroshka dị otú ahụ. Ntụziaka na-adọrọ mmasị nke ga-agbakwunye iche iche na menu nri. Afere dị ụtọ ma na-enye afọ ojuju, ma jiri kvass chiri akpọrọ na ihe mgbakwunye, ọ na-enye ume ọhụrụ.
Ntụ ọka - Sandwich achicha
Ọ dị mma ilele na tebụl gala ma detụ ire ụtọ, ọnụ na-egbu egbu n'ụdị achicha Sanwichi. Na efere a nwere obi, ọ na-achọ ọnwụnwa, dị obere na isi nri. Achịcha Sanwichi ga-enyere aka salads na-ewe iwe.
Nnukwu nri: eghe eghe na mkpụrụ, jerky na chiiz - uzommeputa
Ihe na 25.09.2019 25.09.2019
Ntụziaka a ga - enyere gị aka mgbe ịchọrọ esi nri nke dị mbụ ma dị mfe. Anyị na-atụ aro ka eji aka obere mpịakọta ma sie obere, ma tinye mkpụrụ, chiiz na anụ ahụ na-atọ ụtọ. Maka mpịakọta 8 ...
Etu esi esi ofe ọka
Nchịkọta nke udu mmiri gị ga-enwerịrị ofe ugu. Ọ ga - enyere aka ịlanarị mgbanwe nke oge, na - ekpo ọkụ na ihu igwe oyi mbụ, na - ewusi ọgụ. N’ezie, ị ga-enweta obi ụtọ pụrụ iche site na uto ya bara ụba. ...
Page 1 Page 2 ... Page 644 Next Page
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,349.